IMarike ye-Cryptocurrency ichukumisa i-3 yezigidigidi zeedola njenge-CEO ye-Apple ivuma ukubamba i-Crypto
Umzi-mveliso we-cryptocurrency ube nendibano yenkomo enesidima kule veki iphelileyo, ixabiso lemarike libetha i-3 yetriliyoni yeedola njenge-Bitcoin kunye nezinye iingqekembe ezininzi ezichukumisayo. Nge-rally yakutshanje, uqoqosho lwe-crypto lugqithise ixabiso le-Apple malunga ne-500 yeebhiliyoni zeedola.
Oko kwathiwa, i-CEO ye-Apple uTim Cook usanda kutyhila ukuba ubambe i-cryptocurrency, esongeza ukuba ukholelwa ukuba kunjalo “isengqiqweni” ukongeza i-crypto kwipotfoliyo. I-CEO yenkampani yetekhnoloji yeetriliyoni zeedola yenze isityhilelo ngexesha lenkomfa yeDealBook izolo. Xa wabuzwa ukuba ngaba umnikazi we-crypto, uCook waphawula ukuba: “Ndinayo. Ndicinga ukuba kusengqiqweni ukuba nayo njengenxalenye yepotfoliyo eyohlukeneyo.”
Udliwano-ndlebe naye wabuza i-CEO ukuba ucinga ntoni "Ngokunokwenzeka ukwamkela [crypto] ngeApple Pay okanye ngenye indlela," waphendula wathi:
“Umh, yinto esiyijongileyo. Asiyonto esinezicwangciso zangoku ukuyenza. Ndingathanda, uhlobo, ukuyichaza njengokuba kukho izinto endingenakuzenza, njengemali eseleyo. Andizukutyala imali kwi-crypto, hayi ngenxa yokuba ndingatyala eyam imali kwi-crypto, kodwa kuba andicingi ukuba abantu bathenga isitokhwe se-Apple ukuze batyhileke kwi-crypto.
I-CEO ye-Apple uTim Cook
Uluntu lweCryptocurrency kwiFrenzy eyonwabileyo Ukulandela amagqabantshintshi kaTim Cook
Ethetha ngophuhliso, i-CEO ye-MicroStrategy uMichael Saylor yaphawula ukuba: "Ukuba i-Apple ibinokongeza inkxaso yeBitcoin kwi-iPhone kwaye iguqule i-treary yayo ibe kumgangatho weBitcoin, ingaxabisa ubuncinci ibhiliyoni yeedola kubanini-zabelo."
Abanye abaxhasi be-crypto abaliqela bavakalise uvuyo lwabo ngokuva malunga nokutyhilwa kwe-crypto kukaTim Cook.
Ecacisa ngakumbi ngezimvo zakhe malunga nokuba nengqiqo kokubamba i-crypto, i-CEO yeBillionaire yaphawula ukuba: "Andiniki mntu iingcebiso zotyalo-mali, ngendlela." I-CEO ye-Apple yaqinisekisa ukuba yenze uphando lobuqu kwi-cryptocurrency okwethutyana ngoku, iqaphela ukuba: “Kudala ndinomdla kuyo kwaye, uyazi, bendiyiphanda njalo njalo. Kwaye ke ndicinga ukuba inika umdla. ”
tags iapile, Cryptocurrency, iindaba